ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၂၁-၈-၂၀၁၃)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၂၁-၈-၂၀၁၃)
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ blogspot. ရပ်တော.နားတော.မယ်
ထင်နေတာ ကြာပါပြီ ။
.. လွန်ခဲ.တဲ. ၄-၅ လလောက်က စပြီး blogger တွေ
comment ရေးတာ အရမ်းနဲလာတယ် ၊
တင်ထားတဲ. title တွေမှာ0comment တွေ များလား
blog ရေးတယ်ဆိုတာကလည်း ဖတ်တာလောက် အဆင်မပြေဘူးလေ ၊
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ site ကို ဖတ်တဲ.သူနဲသွားပါလား
ထင်မိတယ် ။ သူလည်း ထင်မှာဘဲ ၊
အပင်ပန်းခံ blog ထောင်တဲ. ဒေါက်တာ လည်း အားလျော.
မှာဘဲ ၊ ရပ်တော.မယ် ထင်ခဲ.တယ် ။
.. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ တင်တဲ.
ဆောင်းပါး အကြောင်းအရာတွေရဲ. ၉၅% ကို